Owesifazane owayengumkaPapa u-Borra Grachevsky ngemuva kokuhlangana nomqondisi odumile wathola amabele anamnandi nezindebe. Ngemva kokuthola isehlukaniso eMoscow eMoscow nasendlini yaseTsaritsino, intombazane yesifundazwe u-Anna Panasenko wathatha igama elidumile.
Manje u-Anna uyaqhubeka nokuqhuba ibhizinisi ekuboniseni ibhizinisi, ekufundeni umsebenzi oholela phambili. Futhi ebusweni bakhe, okuhle kuka-Anna-ngonyaka odlule washada.
Njengabesifazanekazi bezwe abaningi u-Anna Grachevskaya uhloswe ngobuhle. Namuhla, ku-microblogging yakhe, owesifazane uthumele uchungechunge lwezithombe ezivela e-salon, lapho epholile khona isikhumba saso sobuso.
Izithombe zibonisa ngokucacile isikhumba esingaphelele senkanyezi - imibimbi, ukuvuvukala kanye namabala okugqwabanisa ngokukhululekile ukumboza ubuso bomethuli oneminyaka engu-30 ubudala.
Ukuchithwa okunamandla okunjalo kungaba umphumela wokuthumba ngokweqile - U-Anna uhlale ebukeka kakhulu, ukuvakashelwa njalo kwi-solarium kungathinta isikhumba sakhe. Ngaphezu kwalokho, imbangela yokuguqulwa kwesisu ingase ibe izifo ezithathelwanayo zesifo sofuba, isifo se-thyroid, ukusetshenziswa komlomo ngomlomo.
Amathambo ka-Anna Grachevskaya ashaqeka ifomu lawo
Olunye uthando luka-Anna Grachevskaya - umpristi ofana noKim Kardashian. Ngenxa yamathambo amahle, owesifazane odlule ezinyangeni ezimbalwa ezedlule waya emtholampilo ukufaka izimpande zakhe.
Sekuyisikhathi eside i-Grachevskaya igcina imfihlo umphumela wokusebenza, ikhetha ukusabalalisa izithombe kwi-microblogging, lapho kungenakwenzeka ukucabangela ngokucacile "iphuzu lesihlanu". Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ku-instagrams ka-Anna Grachevskaya kwakukhona isithombe lapho umpristi wakhe omusha ebonakala khona ngokucacile.
Kodwa-ke, ukuma kwamathambo kaGrachevskaya kwakwesaba abalandeli bakhe:
_lovevo Kulungile, * ngiyakunxusa .. kwesinye isibindi! Futhi usalokhu uvikela i-Nugaev?
___dukinaaaaa___ Nkosi, * njengamavolon, ama-boobs awela ngaphandle. Kuyinto nje enkulu.Babushka wena ungakanani ubudala? Uzoba vyshlyadish njengowesifazane omdala
shapranova.2004 I-PPC ihle kahle
i-vysotskaya_irisha Ого ахахаха 😂 WIyini nge opo yakho ?? Kungani kubambezela kangaka? Izimplantshi zithuthele?
Futhi yini enye ongayeluleka u-Anna Grachevskaya ukuba ashintshe ekubukeni kwakhe? Siphawula ku-Zen le ndaba 👍 futhi sihlale siqaphela zonke izinkathazo nezisulu zokuhweba ibhizinisi.
Ngenxa yesikhombiso sikaMaxim Galkin u-Alla Pugachyova wabizwa phambi kwamakhamera
U-Dmitry Shepelev akazange abe khona ekulalelweni kokuqala emkhandlwini wokulondoloza
Ukuqala kokuqala kukaBarack Obama nomkakhe batshaya izikrini ezinkulu
Izindaba zakamuva mayelana noJolipittah: UJolie uhlela ukuphazamisa umyeni wakhe, futhi izingane zifuna ukuhlala noyise!
U-Chevalier Young u-Aliki Smehovoy uvunyiwe ngabalandeli bakhe
U-Evgeny Tsyganov noYulia Snigir baphuma ndawonye ngemuva kokuzalwa kwengane
Masibe abaqotho, ake simamise kaningi!
Amakhukhi we-Butter ane-icing
Indlela yokupheka i-jelly obukhulu kusuka ku-strawberries ebusika - zokupheka ngezinyathelo ngezinyathelo ngezithombe namavidiyo
Ingabe kufanelekile ukuhlala nomyeni ophuzayo?
Isaladi sesinkwa sase-Italy
Izimpahla nezicathulo zeenkulisa
Isisu sowesifazane, umphefumulo onomsindo oqhwaqwe
Ukuphuza i-Vitamin ngesitayela sikaBrian Adams
Umethuli we-TV omncane u-Lilia Rebrik
Amasaladi anesibindi sesibindi: isisombululo esheshayo sesidlo sakusihlwa esimnandi
Indlela yokulungisa ibhodlela le-coniferous
Ukukwazi namadoda ase-Italy